Achọpụtara nje na Sardinia akụkụ ebe nkiri 3 FSX
Achọpụtara nje na Sardinia akụkụ ebe nkiri 3 FSX 3 afọ 3 ọnwa gara aga #460
A ka mwepụ n’ebupụ na AVG m. Ọ dị ka nje ma ọ bụ ihe yiri ya dị n'ime nrụnye.
Biko kpọtụrụ onye edemede ahụ ma eleghị anya zere inwe nbudata ndị ọzọ ruo mgbe edozi
Achọpụtara nje na Sardinia akụkụ ebe nkiri 3 FSX 3 afọ 3 ọnwa gara aga #461
Enweghị mkpa ichegbu onwe gị, ị nwere ike ịnwe obi ike na ọ bụ nchọpụta nchọpụta ziri ezi nke ngwanrọ na-egbochi nje virus. My Avast anti-virus, na-eme otu ihe ahụ. Maka ihe ụfọdụ, ndị nyocha a enweghị obi ụtọ na faịlụ nrụpụta .exe enyere na nchekwa ọnọdụ. Achọpụtala m nke a na Avast na-eme ugboro ugboro ebe ọ bụ na ha na-emelite ngwanrọ a ọnwa ole na ole gara aga. Akụrụngwa ahụ nwere mmetụta dị oke egwu ugbu a, yana ọtụtụ faịlụ nke enweghị mmerụ ahụ kpamkpam! A na m enyo enyo otu nsogbu dị na AVG.
Agbanyeghị na ọ ga-eme ka obi sie gị ike. Naanị ị ga-ewepụ ngwa nyocha AVG ndụ gị maka nkeji 10 ma ọ bụ karịa, iji jiri obi ụtọ mezue nwụnye. Ogige Sardinia dị mma nke ukwuu, IMHO kwesịrị itinye gị na sim gị. Echiche kacha mma.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: rikoooo, slvooor
Oge ike page: 0.221 sekọnd